Orinasa mpanamboatra fanapoahana sinoa | Juda
Ny fitaovan'ny mpankafy dia ny miantoka ny famatsiana oksizena ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fandoroana ary manana andraikitra lehibe hanatsarana ny vokatra, ny vokatra, ny fandoroana tanteraka ny arintany.
11. Rafitra famatsian-drivotra
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny lafaoro sokay dia tsy manome afa-tsy rivotra any ambany, izay tsy zaraina mitovy, ary mora tratran'ny fihenan'ny ampahany, ny fitrandrahana ny fotony, ny koka ary ny fanadiovana amin'ny sisiny. Ny rivotra avo lenta vokarin'ny mpankafy fandoroana miavaka dia miakatra amin'ny faritra fanaovana kajy amin'ny alàlan'ny faritra mangatsiaka any amin'ny farany ambany amin'ny lafaoro. Ny faritra mangatsiaka dia faritra fifanakalozana hafanana tokoa. Ny mari-pana ny sokay dia milatsaka mafy rehefa miakatra ny hafanana voajanahary miaraka amin'ny sokay avo. Aorian'ny fifanakalozana hafanana sy hatsiaka, ny hafanana dia entina miverina any amin'ny faritra fanaovana kajy, ary ny sokay dia mangatsiatsiaka ambanin'ny 80 ℃ mba hahafeno ny fepetra takian'ny hafanan'ny lavenona.
Ny tombony azo avy amin'ny fitaovana: ao amin'ny faritra mangatsiaka misy famatsian-drivotra, araka ny tsindry napetraka, ny habetsahan'ny rivotra ary ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana mba hanitsiana ny famatsiana oksizenina ao anaty lafaoro, hahatratrarana ny fifehezana ny fizotran'ny fanaovana kajy, tsy ny hamaha ny olan'ny sinter ampahany, coking, fanitsiana sisiny, pumping, fandoroana tanteraka ny zavatra miovaova navoakan'ny gazy flue, mba hampiorenana tsara kokoa ny fizotry ny famokarana ary hanatsarana ny fahamarinan-toerana sy ny vokatra ateraky ny famokarana.
Fanomezana rivotra sy laoka fanosotra sokay
Na inona na inona fandotoana solika na lafaoro fandrehitra dia mila famatsian-drivotra voafaritra tsara izy io, satria ny fandoroana solika dia tsy maintsy misy fepetra telo, dia ny solika, ny rivotra (oxygen) ary ny afo misokatra. Raha tsy misy fepetra dia tsy hirehitra izy io. Fa ny habetsaky ny rivotra dia kajiana amin'ny alàlan'ny fangatahana oksizenina amin'ireo singa mora may, tsy dia be loatra na kely loatra. Raha ny rivotra be loatra dia esorina ho toy ny gazy flue, hafanana betsaka no ho nesorina. Raha kely ny habetsaky ny rivotra dia tsy ho may tanteraka ny solika, ka miteraka fihetsika mivezivezy amin'ny fizarana fanaovana kajy sy fako angovo. Ny famatsian-drivotra antonony ihany no mety hisy vokany tsara amin'ny fanaovana kalina ary hahatratra ny tanjon'ny fitsitsiana angovo. Amin'ny ankapobeny, dia kajy araka ity paikady manaraka ity: (nesorina tao anaty mari-pahaizana fanaovana kajy) ny tsindry azy dia tokony hikajiana araka ny fanoherana samihafa namboarin'ireo karazana lafaoro isan-karazany sy ny habetsahan'ny akora samihafa. Amin'ny ankapobeny, ny fanoherana ny lafaoro dia mety voasivana rano 40 - 70 mm tsanganana / haavo mahomby (m) azo ovaina mba hikajiana.Fa ny haben'ny voan-tsolika dia tsy mitovy ihany koa. Noho izany, ny mpankafy dia tokony hofidina amin'ny alàlan'ny fikajiana teorika sy amin'ny fototry ny karazana fatana manokana sy ny traikefa azo ampiharina, Afaka manana tsara fampiasana vokany.
Previous: Ny Assembly System System
Manaraka: Valin'ny rivotra roa
Mpanatitra fehikibo vato
2. rafitra fitaterana Belt conveyor, ho fitaovana ankapobeny amin'ny fitaterana maharitra, dia be mpampiasa amin'ny famokarana indostrialy ary iray amin'ireo fitaovana fampitaovana mahazatra. Ny tombony amin'ny fampiasana fonony fehikibo ambanin'ny tany hitaterana ny masinina fehikibo dia ny fampihenana be ny fahalotoan'ny vovoka sy ny tabataba, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny politikam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ary tena mahasoa tokoa ny fametrahana ny endrika orinasa sy ny fanatanterahana ny andraikitry ny orinasa. Fanondroana vato sokay dia mitaky ...
Fikajiana teti-bola (kilao tokana) anarana antsipiriany Vidiny isa $ / $ Total / $ Fototra fananganana 13 T 680 8840 beton 450 cubic 70 31500 fitambaran-jiro 40340 vy lovia vy 140 T 685 95900 raharaha akaiky 33 T 685 22605 fantsona 29 T 685 19865 Total 138370 Kiln body insulation material firebrick （LZ-55 hatramin'ny345mm） 500 T 380 190000 fireclay 50 T 120 6000 Aluminium silicate f ...
Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Manao Hydroxide Kalsioma, Famoronana Hydroxide Kalsioma,